Cumar Cabdirashiid Ra,isul-wasaaraha Dowlada KMG ka ah Ayaa Ugu Dambeyn Maanta Soo Saaray Liiska Gollihiisa Cusub Ee Wasiirada oo Ka Kooban 39 Wasaaradood (Liiska) | buqaqable.net
Cumar Cabdirashiid Ra,isul-wasaaraha Dowlada KMG ka ah Ayaa Ugu Dambeyn Maanta Soo Saaray Liiska Gollihiisa Cusub Ee Wasiirada oo Ka Kooban 39 Wasaaradood (Liiska)
Raisul-wasaare Cumar Cabdirashiid oo mudo dheer laga sugayay Golle wasiiro oo sida la sheegay khilaaf badan dhaliyay ayaa maanta ugu dambeyn
Soo bandhigay liis ka kooban Afartameeyo wasaaradood oo la mid ah in aan waxba laga badalin tirada tii hore tayadana marka laga Reebo laba ama sadax
Siyaasi oo rug cadaa ah oo lagu soo daray gollaha wasiirada ayaa waxaa sidoodi u jooga boqolkiiba Sagaashan 90% wajiyadii hore oo inta badan
Boosaskoodi Fadhiya dhinaca kale iyadoo aan wali la ogeyn in ay si dhib yar ku mari doonaan Madaxweynaha oo Asxaabtiisi laga soo reebay
C/qaadir Cali Cumar iyo Baarlamaanka oo buuq caadeystay ayaa dhinaca kale waxaa maanta magaalada muqdisho shir jaraa,id ku qabtay
Afhayeenka Ahlu-sunnada gobolada dhexe kaasoo si weyn uga soo horjeestay in Axmad Cabdisalan iyo dhuxulow lagu matalo ururkooda xilalna loogu dhiibo dowlada waxaana xasuusin leh in labadaas xubnoodba ay soo galeen Gollaha wasiirada ayna ku joogaan Magaca Ahlu-sunna
wasiirada ilaa hda xilalka waayay waxaa kamid ah
Prof Maxamad Cabdi Gaandi
Daahir Maxamud Geele
Sh: Cabdiraxman Janaqow
Prof: Maxmad Cali ibraahim
wasiiradii is casilay cidna lagama soo celin kuwo cusubna waa lagu soo daray
Wasaaradda Garsoorka iyo caddaaladda. C/kariim Axmed Cali.
Wasaaradda arrimaha dibadda Yuusuf Xsan Ibraahin dheeg.
Wasaaradda Arrimaha Gudaha Sh. C/qaadir cali Cumar.
Wasaaradda Gaashaandhigga Abuukar Cabdi Cismaan Mardaadi.
Wasaaradda Amniga Qaranka Axmed C/salaam xaaji Aadan.
Wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga Caalamiga ah, Mustaf Sh Cali dhuxuloow.
Wasaaradda Maaliyadda Xuseen Cabdi Xalane.
Wasaaradda Haweenka iyo aerr. Qoyska Fowsiyo Maxamed Sheekh.
Wasaaradda xanaanada Xoolaha C/casiis Lafta Gareen.
Wasaaradda dastuurka iyo arr. Federaalka Madoobe Nuunoow.
Wasaaradda beeraha beeraha. Maxamed Ibrqaahin xaabsade.
Wasaaradda hantida qaranka iyo qalabeynta maxamed Mursal.
Wasaaradda hidaha iyo tacliinta sare Cali Axmed (Jingili).
Wasaaradda dhaqancelinta iyo arrimaha bulshada. Prof. maxamed cumar Dalxa.
Wasaaradda gargaarka aadamiga. Maxamud Cabdi Ibraahin (Garweyne).
Wasaaradda warfaafinta. C/raxmaan Cumar Cismaan (Yariisoow).
Wasaaradda Cilmi barista iyo technology-yada Maxamed cali Xagaa.
Wasaaradda macdanta iyo biyaha Cabdi Xasan Cawaale Qeybdiid.
Wasaaradda dib-u-dhiska Xuseen Ceelaabe faahiye.
Wasaaradda dalxiiska iyo duur joogta C/laahi Yuusuf Cigaal.
Wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha maxamed cabdi Xayir Maareeye.
Wasaaradda Caafimaadka. Maxamuud Jirde Xuseen.
Wasaaradda tamarta iyo shidaalka C/raxmaan Jaamac.
Wasaaradda Boostda iyo isgaarsiinta C/risaaq jurille.
Wasaaradda jaaliydaha C/laahi Axmed c/lle Azhari.
Wasaaradda ganacsiga C/rashiid Maxamed Cirro.
Wasaaradda howlaha guud iyo griyeynta Yuusuf Geelle Ugaas.
Wasaaradda warshadaha C/lla Boos Axmed.
Wasaaradda Bay’ada iyo dhirta Burci maxamed xamza.
Wasaaradda Dhallinyarada iyo Ispoortiga Qadiijo maxamed diiriye.
Wasaaradda Hormarinta reer Miyiga. Maxamed Cabdi Yuusuf.
Wasaaradda waxbarashda iyo barbaarinta C/nuur Macalin Maxamuud.
Wasaaradda Owqaafta iyo arrimaha diinta Sh Nuur Cali Aadan.
Wasaaradda dib-u-heshiisiinta Xuseen Warsame samatar.
Wasaaradda Lacagta C/laahi Maxamed cali (sanbaloolshe).
Wasaaradda hub ka dhigista iyo jiheynta maleeshiyaadka Cumar cali Rooble.
« Dadka Madow iyo Dhamaan Qaarada Afrika Ayaa La Madluunsan Guuldaradii Ku Timd Rigoorayaalka GHANA oo Sanadkan Qori Laheyd Taariikh Cusb AMINARTS) Somali President Sharif Sheikh Ahmed pleaded for help on Monday at a regional summit, as an al-Qaeda-inspired insurgency closed in on his Mogadishu palace. »